Archive du 03-févr-2022
Rivodoza BATSIRAI Isan’ireo mahery vaika tato anatin’ny 30 taona
Tany amin’ny 840 km antsinanan’Ambila Lemaitso no nisy ny foiben’ilay rivodoza BATSIRAI omaly tamin’ny 3ora tolakandro.
Miandry izay midona sisa
Satry hitantara zava-mahafinaritra isan’andro eto amin’ity firenena ity, hoy ny namana mpamakafaka iray izay omaly, saingy indrisy fa ifonana amin’ireo mpanara-baovao fa tena mbola tsy izay aloha hatreto no mibahana eto amin’ny firenena.
Ankizin’ny akany nitsoaka Niala tany Ambohidratrimo, tany Carion vao hita
Zazalahy miisa telo samy tsy ampy taona nobeazina tao amin’ny akany fanabeazana ireo zaza nania ao Alakamisy Ambohidratrimo no tafatsoaka afak’omaly 01 febroary.
Trafikana volamena “Ny mpitondra mifandimby no manao azy”
Ny taona 2010 no namolavolana ny vina mitondra ny lohateny hoe “Madagascar le changement”. Mpikamban’ny filankevitra ambonin’ny tetezamita miisa 135 amin’ireo 150,
Antananarivo renivohitra Niakatra 30% ny hofantrano
Niakatra hatrany amin’ny 30% ny hofatrano eto an-drenivohitra nanomboka tamin’ity taona 2022 ity. Vao nigadona ny taona vaovao dia efa saika nandefa taratasy fampiomanana tany amin’ireo mpanofa tranony avokoa ny
Joseph Yoland “Mila ovana ny lalàna mikasika ny volamena eto”
Mila ovana ny lalàna mikasika ny volamena eto amintsika, hoy ny mpandraharaha sady filoha lefitry ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara, faritanin’Antsiranana, Joseph Yoland.
APIPA Mampitandrina sahady ireo mponin’ny faritra iva
Nandefa filazana mampitandrina sahady ny mponina mipetraka eny amin'ny faritra iva lalovan'ny renirano'Ikopa, Sisaony ary Mamba ny APIPA
Noho ny rivodoza Miato ny fampianarana manomboka rahampitso
48 ora mialohan'ny 5 febroary 2022 tombanana hidiran'ny rivodoza Batsirai, nandray fepetra sy toromarika niainga tamin'ny Filankevitry ny Minisitra ny Fanjakana.
Befandriana avaratra Tratra ireo mpangalatra soliky ny JIRAMA
Nandritry ny fisafoana ny làlam-pirenena faha 32 mampitohy ny distrikan’i Befandriana Avaratra sy Mandritsara izay notarihin'i ZFK1 Ramanamitsiry Rolland, CB PVT Bde Befandriana Avaratra ny 1 febroary 2022,
Minisitry ny fiarovana Lasa hanao inona any Russie ?
Misy ny loharanom-vaovao milaza amin'izao fotoana izao fa lasa any Russie ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena Jeneraly Rakotonirina Richard.
Tsy fandriampahalemana Voaratra no sady very vola ilay ramatoa mpivarotra
Ramatoa iray avy nivarotra trondro tany Miarinarivo ary handeha hamonjy fodiana toy n'y mahazatra isan’andro omaly no sendran’ny asan-jiolahy izay tena tsy nampoizina.
Ambohimangakely Misy fanariam-pako mampitaraina vahoaka
Misy ny antso fanairana noho ny tsy fanajàna ny fahadiovana sy ny tontolo iainan'ny mponina ao anatin'ny kaominina Ambohimangakely amin’izao fotoana izao
Fihetsiketsehana etsy sy eroa Efa miomana amin’ny fifidianana ny AREMA ?
Nitohy ny sabotsy sy ny alahady lasa teo ny asa tanamaro izay nataon’ireo tanora Arema eny ambany tanàna. Ny teny amin’ny boriboritany fahadimy
Isika tondra-drano Ny ranon’ny JIRAMA tsy mandeha
Ahoana io rano tsy mandeha io nefa isika aza tondra-drano, hoy ny fanontanian’ny mpanara-baovao manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny?
SAMPATI Foibe - FJKM Manentana ireo skoto handray ny andraikiny
Ankoatry ny maha sampana velona ny Sampana Mpanazava sy Tily ao anaty fiangonana ny SAMPATI FJKM dia tena fikambanana amin’ny maha skoto azy koa izy,
Traboina eny amin’ny faritra iva Mbola somokotra amin’ny fiverenana an-tokantrano
Mbola somokotra amin’ny fiverenana ao an-tokantranony avokoa ny ankamaroan’ireo traboina amin’izao na dia mbola ho avy aza ilay rivo-doza Betsiray izay lasa miteraka resabe eny anivon’ny fiaraha-monina eny.
Arnaud Randrianantenaina Hilalao ao amin’ny El Gouna FC - Ejipta
Hilalao any Ejipta ihany koa dia ao amin’ny El Gouna FC ilay lohalaharana malagasy mbola ao anatin’ny fahatanorany tanteraka, Arnaud Randrianantenaina.
Fikambanana HWPL Hanaparitaka ny kolontsain’ny fandriampahalemana
Ny fikambanana « Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light » na HWPL dia hanomboka ny asany eto Madagasikara manomboka amin’ity taona 2022 ity ary izy